Pamela Webber Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Pamela Webber
Pamela Webber ndiye Chief Marketing Officer pa 99designs, yepasirese online graphic dhizaini yemusika. Pa 99designs, Pamela anotungamira iyo yepasirese timu yekutengesa inoona nezve kutyaira vatengi kuwana uye kuwedzera kukosha kwehupenyu hwevatengi. Pamusoro pechiitiko chake semushambadziri, Pamela anounza ruzivo rwekutanga-ruoko seecommerce muzvinabhizimusi uye achishanda pamwe nekukurumidza-kutanga kutanga.
China, November 2, 2017 China, November 30, 2017 Pamela Webber
Chokwadi iwe wakambonzwa ngano kubva kumberi mitsara uye ukatoteerera yambiro kubva kune vanobatsira shamwari uye vaunoshanda navo. Asi kana iwe uri mumwe wezviuru zvevamabhizimusi vakanyoreswa kuenda kunopenga gore raNdira kupenga kunonyatso kuzivikanwa seCES (Consumer Electronics Show) muLas Vegas kekutanga gore rino (Ndira 9-12th), zvingave zvakaoma kufungidzira zvechokwadi zviri mberi kwako. Zvakadii neizvi: Fungidzira bhora renhabvu-saizi horo pane horo izere nemamirioni
Zvinoitwa nezvisingaitwe zveHoridhe Branding Zvinoenderana ne99designs
Chipiri, Gunyana 18, 2016 China, Gumiguru 20, 2016 Pamela Webber
Husiku hwakanyarara, iwo ma dreidel ari kuoma, uye vatengi vako vari kuvhura ma wallet avo. Kana iwe uchikwanisa kuita rako rechiratidzo chikamu chemwaka wavo wezororo nenzira yechisikigo uye inofadza, vanozokurangarira zvakanaka mukati megore Idzva. Heano mamwe anobatsira Ita nezvisingaitwe kuti zvikubatsire kufamba mwaka. Ita: chengetedza kutendeseka kwako kana yako yakajairika midhiya nhepfenyuro ine majee anokatyamadza, tweeting kunze sappy mameseji azere nezororo mufaro
6 Mibvunzo Yekuzvibvunza Iwe Usati Watanga Yako Webhusaiti Dhizaini
Muvhuro, Ndira 11, 2016 Chipiri, January 12, 2016 Pamela Webber
Kuvaka webhusaiti kunogona kunge kuri basa rinotyisa, asi kana iwe uchifunga nezvazvo semukana wekutarisazve bhizinesi rako uye kurodza mufananidzo wako, iwe unodzidza zvakawanda nezve yako marangi, uye ungatonakidzwa nekuzviita. Sezvo iwe paunotanga, urwu runyorwa rwemibvunzo runofanira kubatsira kukuendesa iwe munzira chaiyo. Chii chaunoda kuti webhusaiti yako iite? Uyu ndiwo mubvunzo wakakosha kupindura usati watanga